I-Forklift yokuqeqesha ifinyelela isitifikedi se-Forklift Ubufakazi beshidi
I-Forklift - Finyelela iloli
I-Forklift & Reachtruck
Ufunda ukusingatha iloli yokuphakamisa nokufinyelela ngendlela efanele. Ujwayela ukulayisha nokulayishwa, ukushayela izinqubo, ukusebenza ngokuphepha, ukufaka futhi ukufaka imithwalo yokuphakama ekuphakameni kanye nobubanzi obuncane bomgwaqo. Ufunda ukushayela okuphephile nokuphephile, ufunda ukusebenza ngokunembile nangokusebenza ngemishini. Sifundisa ukuthi ungasebenza kanjani ne-forklift encane yokusebenza futhi ufike egalari. Ngomqashi wakho kufanele usebenze ngemishini emikhulu.
Uma ungena ohlelweni, sizokunikeza isitifiketi umshayeli we-forklift (noma / futhi fikela umshayeli weloli). Lesi sitifiketi samukelwa abaqashi base-Antwerp futhi siyinto enamandla uma usebenzisa.
I-Forklift Yokuqeqeshwa - I-Reachtruck isilinganiso iminyaka emibili kuya kwemihlanu.
Uqala kwimodemu ye-adder.
Kuhlelo lokuqeqesha lwe-Heftruck - Reachtruck akudingeki ube nolwazi olukhethekile lwangaphakathi.
Kubalulekile ukuthi unomqondo okwanele wemfanelo futhi unempilo efanelekile. Njengomshayeli wazo zonke izimboni zezithuthi zokuthutha, uyinzuzo eyengeziwe yenkampani. Njengoba kunikezwe umqondo omkhulu wemfanelo, ukuphikiswa kokucindezeleka kuyadingeka
Ukhona enkampanini ehilelekile ekugezeni kwezimpahla. Unemibandela yokusebenzisa. IBelgium isanda yesikhulumi sezinsiza. I-Port of Antwerp iyaqhubeka ikhula futhi ingumqashi obalulekile. Ngakho-ke, nale mfundo unethuba elikhulu lokuthola umsebenzi.
Umshayeli we-forklift ufanelwe yini?
Ngemuva kokuqeqesha nokuphakama kwe-reachtruck, usengathuthukisa kwenye indawo njengomshayeli we-crane nazo zonke ezinye izindlela zokuthutha.